Habakuku 1 YCB – Habakuk 1 AKCB | Biblica
Habakuku 1 YCB – Habakuk 1 AKCB
1Eyi ne asɛm a odiyifo Habakuk nya fii Awurade nkyɛn wɔ anisoadehu mu.
2Awurade, enkosi da bɛn na memfrɛ nsrɛ mmoa,
nanso wuntie me?
Meteɛ mu frɛ, “Akakabensɛm!”
nanso womma mmegye me.
3Adɛn na woma mehwɛ ntɛnkyew?
Adɛn nti na wotena bɔne ho?
Ɔsɛe ne akakabensɛm da mʼanim,
basabasayɛ ne abɛbrɛsɛ atwa me ho ahyia.
4Enti mmara nyɛ adwuma
na atɛntrenee nni baabiara,
atirimɔdenfo aka atreneefo ahyɛ,
enti wɔkyea atemmu.
5“Hwɛ aman no,
na wo ho bedwiriw wo!
Merebɛyɛ biribi wɔ wo bere so,
na sɛ wɔka kyerɛ wo a,
6Merema Babiloniafo asɔre,
ɔman a wɔyɛ atirimɔdenfo ne ntɔkwapɛfo;
wobu fa asase nyinaa so,
na wɔfa tenabea a ɛnyɛ wɔn de.
wɔyɛ wɔn koko so ade,
de pɛ anuonyam ma wɔn ho.
8Wɔn apɔnkɔ ho yɛ hare sen asebɔ,
na wɔn ho yɛ hu sen pataku a ɔnam anadwo,
wɔn apɔnkɔsotefo kɔ wɔn anim mmarima so,
wofi akyirikyiri nsase so,
na wɔbɔ hoo sɛ akorɔma a ɔrekɔkyere aboa.
Wɔn dɔm pem kɔ wɔn anim te sɛ nweatam so mframa,
na wɔtase nneduafo sɛ nwea.
10Wodi ahene ho fɛw,
wɔka aman sodifo anim,
na wɔtwee nkuropɔn a ɛwɔ bammɔ dennen.
Wosisi dɔte mpie nam so kyekyere atamfo.
Afɔdifo a wɔn ahoɔden yɛ wɔn nyame.”
12Awurade, wunni hɔ fi tete ana?
Me Nyankopɔn, me Kronkronni, wo a wote ase daa.
Wo, Awurade, woapaw wɔn sɛ wommu atɛn;
wo, me Botantim, woahyɛ wɔn sɛ wɔntwe aso.
13Wʼaniwa yɛ kronkron a wuntumi nhwɛ nnebɔne;
wunnyigye nnebɔne so.
Na adɛn nti na wugyigye nnipa akɔntɔnkye so,
na dɛn nti na wayɛ komm wɔ bere a
atirimɔdenfo rememene atreneefo?
14Woama nnipa ayɛ sɛ nsumnam a ɛwɔ po mu,
te sɛ abɔde a ɛwɔ po mu a wonni sodifo.
15Ɔtamfo tirimɔdenfo no de darewa yi wɔn,
ogu nʼasau de buma wɔn,
na afei ɔsɛpɛw ne ho ma nʼani gye.
16Ne saa nti ɔbɔ afɔre ma nʼasau
na wahyew aduhuam ama no,
efisɛ asau yi so na ɔnam nya yiyedi,
na odi nʼakɔnnɔ aduan.
na ɔmfa atirimɔden nsɛe aman ana?
AKCB : Habakuk 1